यस्ता छन् केहि टिप्स महिलाको स्वास्थ्य शरीरका लागि - ज्ञानविज्ञान
यस्ता छन् केहि टिप्स महिलाको स्वास्थ्य शरीरका लागि
आफ्नै स्वास्थ्यमा ध्यान दिन नसक्दा बिरामी महिला बढिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले आफू स्वस्थ रहनका लागि यी महत्वपूर्ण कुरा जानकार रहनुहोस् ।
घरायसी जिम्मेवारी र छोराछोरीको चिन्तालगायतका कारण महिलाहरूले आफ्नो उति ख्याल गरेका हुँदैनन् । सोही कारण उनीहरू विभिन्न समस्याको सिकार हुनुपरेको छ ।
यी महत्वपूर्ण टिप्स जनिराखौ ।
तनाव नष्ट गर्नुहोस्
यो निकै ठूलो समस्या हो र सबैभन्दा बढी महिलामा देखिने गर्छ । घरायसी काम, श्रीमान्देखि सन्तानसम्मको चिन्ता लिनुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई । तर, तनावले स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुन सक्छ । तनाव बढी लिने महिलामा सुगर, हृदयरोगजस्ता डरलाग्दा समस्या देखा पर्न सक्छन् । यसैले गर्दा धेरै तनावमा नरहनुहोस् ।
खानपानमा ध्यान राख्नुहोस्
धेरैजसो महिला कामकाजको चक्करमा खानपिनमा ध्यान दिँदैनन् । तर, यसो गर्नु राम्रो हुँदैन । आफ्नो पूरै घरपरिवारको ध्यान राख्ने महिलाले आफ्नै खानपानको ध्यान राख्दैनन् । र, स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने गर्छ ।
प्रशस्त निद्रा लिनुहोस्
निद्रा महिलाहरूका लागि बहुतै जरुरी छ । दिनभरिको थकानबाट आराम पाउनका लागि मात्रै होइन, मुटुसम्बन्धी रोगबाट मुक्त हुनका लागि पनि महिलाहरूलाई पर्याप्त निद्रा आवश्यक हुन्छ । यति मात्रै होइन, महिलाहरूमा धेरै उत्तरदायित्व हुने भएकाले स्वाभाविकै रूपमा तनाव हुन्छ । तनावलाई सहज तरिकाले लिँदै प्रशस्त निद्रा लिन सकियो भने मानसिक समस्याबाट समेत टाढा रहन सक्नुहुन्छ ।
अत्यधिक क्याल्सियम सेवन नगर्नुहोस्
शरीरलाई आवश्यकभन्दा बढी क्याल्सियम सेवन नगर्नुहोस् । यसले किड्नीसम्बन्धी समस्यासँगै मुटुसम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्न सक्ने
सम्भावना हुन्छ ।
महिलाले अधिक मात्रामा व्यायाम गर्न जरुरी छ । हप्तामा दुईदेखि तीन दिन व्यायाम गर्न सक्नुभयो भने हृदयविकार, सुगर, क्यान्सरजस्ता डरलाग्दा रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ । व्यायाम गर्ने हो भने तपाईंको व्यक्तित्व राम्रो देखिनुका साथै स्वास्थ्यसमेत राम्रो हुन्छ ।
सही समयमा बच्चा जन्माउनुहोस्
आजभोलि अलिकति उमेर ढल्किएपछि गर्भवती हुने महिला बढेका छन् । यद्यपि तपाईंले ३२ वर्षभन्दा माथिको उमेरमा बच्चा जन्माउने सोच बनाउनुभएको छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिन जरुरी छ ।
यौनसम्पर्कले तनावलाई कम गर्छ । यति मात्रै होइन, स्वस्थ यौनसम्पर्कले दीर्घकालीन रोग लाग्ने खतरासमेत कम हुन्छ । त्यसकारण यौनसम्पर्कका वेला कुनै प्रकारको केही समस्या भयो भने तुरुन्त चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस् ।
Topics #महिला #शरीर
Don't Miss it यसो गर्नुहोस् हातगोडा फुस्रा भएमा
Up Next यसरी स्वस्थ रहनुहोस् चिसो मौसममा
थाइराइड र डाइबेटिजले सताए के गर्ने ?
थाइराइड घाँटीमा हुने ग्रन्थी हो, यो रुद्र घन्टीको ठ्याक्कै तल हुन्छ। त्यसले थाइराइड हर्मोन उत्पादन गर्छ। त्यो हर्मनको उत्पादनमा गडबढी…
Indian businesswoman working at desk
कार्यालयमा तनाव उत्पन्न हुन सक्ने केही कारण, यस्ता छन्
आफूले चाहेभन्दा फरक काम । कामको दीर्घकालीन असुरक्षा आदि कम पारिश्रमिक । कामको अत्यधिक दबाब । समयमै बढुवा नहुनु ।…
के तपाइँलाइ थाहा छ ? आफ्नै भान्सामा यस्ता औषधीय गुणहरु पाइन्छ – जानौं कुन कुरामा के औषधीय गुण छ ?
हाम्रो आफ्नै भान्सामा थुप्रै औषधीय गुण रहेका खानेकुराहरु रहेका छन । जसको बारेमा हामीलाई थाहा पनि छैन । आज हामी…
संसारकै अग्लो कुकुर
संसारकै अग्लो कुकुर फ्लोरिडाको लिज्जी नामक कुकुर संसारको सबैभन्दा अग्लो कुकुर हो(अहिले सम्म पाइएको मध्हे) । कालो र सेतो रंगको…
किन खाने अदुवाको चिया ? थाहा पाउनुहोस
१. रक्त सञ्चारमा सुधार अदुवामा रहेको भिटामिन र खनिज एवं एमिनो एसिडले रक्त सञ्चारलाई राम्रो पार्छ र विभिन्न रोगको खतराबाट…
कसरी हटाउने ? स्ट्रेच माक्र्स
अण्डाको सेतो भाग अन्डामा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ । यसको उपयोग छालामा आउने स्ट्रेच माक्र्स हटाउनमा पनि गर्न सकिन्छ ।…
कहाँ सजिलो छ र असल शिक्षक बन्न ! असल शिक्षक बन्न यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
शिक्षक हुनु भनेको विद्यार्थीको मन मस्तिष्कलाई प्रज्ज्वलित पार्नु हो । अनुशासन, नैतिकता, सत्मार्ग सिकाउने शिक्षकहरू सधैँ सहनशील, धैर्य, समानतावादी, सरल,…
सबै भन्दा उत्तम पुरूषमा हुन्छन् यस्ता गुण
समुद्रशास्त्रबारे त तपाईंले अवश्य सुन्नुभएको होला । र आज हामी यहि शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार तपाईका लागि कस्तो जीवनसाथी उपयुक्त होलान्…
तपाईलाई बारम्बार थकान लाग्छ ? जतिखेर पनि थाक्नुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यस मध्ये एक पानी जीवनका लागि नभई…